कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया सुरु…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया सुरु…हेर्नुहोस् ।
कार्तिक २२, २०७७ शनिबार 3
काठमाडौ : नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस 9कोभिड–१९)को खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् लगायत सरकारका सरोकारवाला निकायको संयुक्त पहलमा कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया थालेको हो ।
परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)को मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिट्टै नेपाल भित्र्याउन सरकार सक्रिय रहेको छ ।नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा। प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिदका दुवै प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ भने ।
अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेका छन् । “कुनै पनि मुलुकको परीक्षण झ्याप्प सफल भइहाल्यो भने त खोप किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले पहल थालेको हो,” ज्ञवालीले थपे ।
उनले खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप १५ सय १२ जनामा संक्र’मण, होम आइसोलेसनमा १९ हजार बढी !
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ५ सय १२ संक्र’मित फेला परेका छन् । जस्मा ६ सय २५ महिला र पुरुष ८ सय ८७ रहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ५ सय १२ संक्रमित थपिएका हुन् ।
योसंगै काठमाडौ उपत्यकामा सं’क्रमितको कुल संख्या ८७ हजार १ सय ९४ पुगेको छ । योसंगै काठमाडौंमा ७० हजार ७ सय ७३ जना, ललितपुरमा ९ हजार ९ सय ९१, भक्तपुरमा ६ हजार ४ सय ३० जना संक्र’मित थपिएका छन् ।
काठमाडौंमा होम आइ’सोलेसनमा रहनेको संख्या ११ हजार ५ सय ७०, ललितपुरमा १ हजार ८ सय ३ र भक्तपुरमा ६ हजार ४ सय ३० रहेको छ ।
योसंगै काठमाडौं उपत्यकामा होम आइसो’लेसनमा बस्नेको कुल संख्या १९ हजार ८ सय ३ पुगेको छ ।
Prevनेपाली सेनाको मानार्थ महारथी हुन नरभाणे नेपाल आएपछि मनिषा कोइरालाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया…हेर्नुहोस् ।
Nextको हुन् अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति बनेका ‘जो बाइडेन’ ?
हार्दिक बधाई ! नेपाली दुई वैज्ञानिक अमेरिकामा उच्च वैज्ञानिक पुरस्कारले सम्मानित…हेर्नुहोस् ।
अमेरिकी चुनावमा २ नेपाली अमेरिकनमध्ये ढकाल ४८३९ मतले विजयी, गुरुङले ल्याइन् २९८५ मत…पूरा पढ्नुहोस् ।
सुन्तला खानुको १० फाइदाहरु…हेर्नुहोस् ।
सेवाबाट अवकाश लिने तयारी गरेका टिचिङ अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा.सुनील झाको कोरोनाका कारण नि’धन !
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1515)
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1355)
गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (711)
असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (546)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (423)
के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (388)
जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (320)
नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (247)
आयरल्यान्डद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण
मेलम्चीका बाढीपीडितलाई बर्गर हाउसको सहयोग
१.	आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह (1515)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1355)
३.	गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (711)
४.	असार १ गतेदेखि उपत्यकाभित्र के-के खोल्न पाइन्छ ? (546)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (423)
६.	के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? (388)
७.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (320)
८.	नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (247)